Dulmarka Wacyigelinta - Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-La'aanta
Caawinta reer Oregon inay cuntada miiska saaraan
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu cuno. Haddii aanu nahay Partners for a Hunger-Free Oregon, waxaanu ka shaqaynaynaa maalinta uu gobolkeenu yahay mid gaajo la'aan ah; Marka qof kasta oo Oregonian ah - laga bilaabo caruur ilaa dad waayeel ah - uu caafimaad qabo oo soo korayo sababtoo ah waxay heli karaan cunto la awoodi karo, nafaqo leh.
Tiirka shaqadeenu waa qaabaynta iyo fulinta mashaariicda isku xidha dadka reer Oregon ee halista ugu jira gaajada barnaamijyada nafaqaynta ee dawlada dhexe ee jira, ka caawinta dadka awooda u leh inay iibsadaan cunto iyo inay helaan cunto diyaarsan oo loogu talagalay caruurta gudaha deegaanka dugsiga iyo inta lagu jiro fasaxa xagaaga.
Shabakaddan barnaamijyadu waxay ka kooban tahay shabakadda badbaadada ee ka hortagta gaajada waxay hoos u dhigtaa saboolnimada dad badan oo waddankeenna ah. Waxaan la shaqaynaa la-hawlgalayaasha gobolka oo dhan si aan u hubinno in qof walba uu heli karo kheyraadkan, annagoo adeegsanayna wacyigelin si loo yareeyo farqiga.
Barnaamijka Caawinta Nafaqada Dheeraadka ah (SNAP)
SNAP waa barnaamij federaali ah oo diiradda saaraya gelinta cunto caafimaad leh iyo nafaqo leh meel ay gaaraan dadka Oregon ee dakhligoodu hooseeyo. Barnaamijku waxa uu guul weyn ka soo hooyey dhimista gaajada carruurnimada iyo nafaqa-darrada. Hadda, in ka badan 26 milyan oo Maraykan ah, oo ay ku jiraan in ka badan 600,000 Oregonians, ayaa qaata dheefaha SNAP bil kasta.
Faa'iidooyinka SNAP, ee lagu bixiyo kaarka Trail Trail ee Oregon, waxay ku abuuraan saamayn togan oo bulshada dhexdeeda ah, waxayna maanta lama huraan u yihiin sidii ay ahaayeen markii barnaamijku bilaabmay. Qoysaska, dadka waaweyn ee waaweyn, dadka naafada ah, iyo dadka Oregon ee dadaalka badan waxay awoodaan inay helaan taageerada ay u baahan yihiin si ay dugsiga ugu sii jiraan, shaqadooda u haystaan, oo ay cuntada miiska u saaraan.
Tan iyo markii la aasaasay 2006, PHFO waxa ay qaabaysay oo ay fulisay mashaariic horumarinaysa helitaanka barnaamijka iyada oo loo marayo isgaarsiin wax ku ool ah, wacyigelin iyo kaalmo codsi oo loogu talagalay dadka Oregon ee xaqa u leh. Waxaan siinaa tababaro la-hawlgalayaasha bulshada kuwaas oo xiisaynaya inay dadka ku xidhaan SNAP, waxaana si dhow ula shaqaynaa la-hawlgalayaasha gobolka oo dhan si loo horumariyo adeegyada dhammaan.
Iyadoo loo marayo Waaxda Adeegga Cuntada iyo Nafaqada ee Waaxda Beeraha ee Mareykanka, dhowr barnaamij oo nafaqeyn ah ayaa diyaar ah oo siiya cunto caafimaad leh carruurta dugsiga.
Waxaa maamula Waaxda Waxbarashada Oregon, barnaamijyadani waxay diyaariyaan quraac, qado, cunto fudud oo dugsiga dhexdiisa ah, iyo cuntada dugsiga ka dib iyo cunto fudud dhammaan carruurta.
Carruurta qaarkeed waxay xaq ugu leeyihiin adeegyadan oo aan qiimo lahayn waalidiinta, qaarna waxay ku heli karaan cuntada iyagoo bixinaya lacag yar.
Barnaamijyadani waxay caawiyaan ka hortagga gaajada iyo buurnaanta, waxayna ardayda siinayaan fursadda ugu wanaagsan ee ay uga faa'idaysan karaan waxbarashada. Ku dhawaad ​​315,000 arday oo ku nool Oregon oo dhan ayaa xaq u leh cunto bilaash ah ama qiimo jaban, si kastaba ha ahaatee kaliya qiyaastii 210,000 oo qadada gelitaanka ah, iyo 110,000 oo quraacda dugsiga ah.
Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-la'aanta waxay naqshadeeyaan oo fuliyaan mashaariicda diiradda saaraya xidhitaanka farqiga u dhexeeya tirada carruurta u qalma, iyo tirada carruurta xaqa u leh ee helaya cuntada bilaashka ah ama qiimaha jaban ee dugsiga.
Ku xidhida ardayda agabkan la heli karo goor hore waxay hubinaysaa inay awoodaan inay ku koraan farxad iyo caafimaad!
Cuntooyinka xagaaga Marka dugsigu maqan yahay
Kumanaan carruur Oregon ah ayaa ka qaybqaata nafaqeynta dugsiga inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Iyada oo loo marayo USDA, Barnaamijka Adeegga Cunnada Xagaaga (SFSP) waxa ay siisaa lacag ururada si ay cunto ugu siiyaan carruurta inta lagu jiro xagaaga marka dugsigu aanu ku jirin casharka.
315,000+ carruur ah oo u qalma cuntada bilaashka ah ama qiimaha jaban ee dugsiga, kaliya qiyaastii 35,000 waxay helaan cuntooyin bilaash ah inta lagu jiro xagaaga, taasoo ka tagaysa farqi weyn oo carruurta ah kuwaas oo wajahaya gaajo illaa sanadka oo loo maleynayo inay ku saabsan tahay madadaalo qorraxdu!
Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta, iyagoo kaashanaya Waaxda Waxbarashada Oregon, waxay naqshadeeyaan barnaamijyo iyo waxqabadyo si ay u kordhiyaan tirada goobaha adeegaya cuntooyinka xagaaga, kordhinta helitaanka cunnooyinka xagaaga ee bilaashka ah ee bulshooyinka iyaga ku tiirsan.
Waxaan diirada saareynaa bixinta wacyigelinta barnaamijka gobolka oo dhan, kaalmo farsamo iyo deeq maalgelin bulshooyinka maxalliga ah ee bilaabaya adeegyada cusub ama ballaarinta.
Caawi isku xirka bulshooyinka iyo qoysaska Cuntooyinka xagaaga